ỊTỌLITE ​​IHE NTANETỊ ELU - NGWA - 2019
Ọ dị mkpa iji wụnye rawụta n'ime ụlọ. Họrọ ebe kachasị mma ka mgbaàmà sitere na netwọk ikuku na-ekpuchi isi ihe dị mkpa, na ogologo netwọk netwọk zuru ezu iji jikọọ na kọmputa. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bara uru ịtụle ọnụnọ nke nkewa n'etiti ụlọ mgbe ị na-ahọrọ ebe.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-agagharị n'ụlọ ọrụ ahụ nwere ajụjụ yiri nke ahụ, ebe njikọ ahụ dị na azụ. Lezienụ anya na ya. N'ebe ahụ, ị ​​ga-ahụ WAN ọdụ ụgbọ mmiri, Ethernet1-4, DC, bọtịnụ WPS na / gbanyụọ. Jikọọ mains USB, nye ike ma gaa n'ihu.
Ọ na-anọgide na-elele ọnọdụ nke IPv4 protocol na sistemụ. Ịnata IP na DNS ga-eme na akpaghị aka. Iji jide n'aka na usoro ntinye ede ziri ezi ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee ha, na-ezo aka n'isiokwu anyị ọzọ na njikọ dị n'okpuru ebe a. Igbu Nzọụkwụ 1 site na ngalaba "Otu esi esi rụọ ọrụ netwọk dị na Windows 7".
Gụkwuo: Windows 7 Ntọala Ntọala
Ịhazi NWA ihe ntanetị
A na-ahazi ọtụtụ ụdị ndị na-agagharị agagharị site na otu ụdị weebụ, ụfọdụ n'ime ha nwere naanị atụmatụ. Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị nwere uzo dị iche iche, naanị chọọ otu ngalaba na edemede na setịpụrụ ụkpụrụ ndị enyere na ntụziaka dị n'okpuru ebe a. Ka anyị lelee ụzọ esi abanye ntọala ahụ:
Mepee ihe nchọgharị na ụdị dị mma na ntanetị192.168.10.1wee pịa Tinye.
Na ụdị na-egosi, tinye nbanye na paswọọdụ, nke na ndabaraha.
Ugbu a ị nọ na ntanetị weebụ, ị nwere ike ịga n'ihu na-edezi ihe niile ị chọrọ.
Ndị mmepe na - enye ohere iji ngwa ngwa ngwa nhazi, nke ga - aba uru nye ndị ọrụ na - enweghị ọrụ ma ọ bụ ndị na - adịghị mkpa iji ntinye ọzọ. Ọrụ na Nna-ukwu bụ:
Gaa na ngalaba Nhazi Ọkachamara ma kpebie ụdị nke router. Ị ga-ahụ nkọwa zuru ezu nke ọnọdụ ọ bụla, ya mere ime nhọrọ ziri ezi agaghị abụ ihe siri ike. Mgbe pịa na "Na-esote".
A na-edozi WAN nke mbụ, ya bụ, njikọ ejiri. Họrọ ụdị njikọ nke onye nkesa kpebiri. Dabere na usoro ahọrọ ahọrọ, ịnwere ike ịbanye ozi ndị ọzọ. Ihe a niile ị nwere ike ịchọta na nkwekọrịta ahụ.
Ugbu a arụ ọrụ ikuku na-arụ ọrụ. Debe ụkpụrụ ndị dị mkpa maka ebe ị ga-esi nweta ya, chọpụta aha ya, ebe dịgasị iche na ọwa. Ọ na-abụkarị na onye ọrụ nkịtị gbanwere "SSID" (aha nke isi) n'onwe ya ma nke a mezue usoro nhazi.
Ọ dị mkpa iji hụ na nchekwa Wi-Fi na njikọ ndị ọzọ. A na-eme nke a site na ịhọrọ otu ụdị nzuzo nke ezoro ezo ugbu a ma gbakwunye paswọọdụ nkwenye. Nhọrọ kachasị mma ga-abụ usoro "WPA2".
Mgbe ịpị bọtịnụ ahụ "Emechara" A ga-echekwa mgbanwe niile, onye rawụta ga-adị njikere maka ọrụ. Otú ọ dị, ngbanwe ngwa ngwa nke ntinye ole na ole anaghị adabara ọtụtụ ndị ọrụ, yabụ na ọ ga-adị ha mkpa itinye ihe niile aka. Anyị ga-atụle nke a.
Nke mbụ, ịkwesịrị ịmekọrịta njikọ njikọ - mgbe ị na-abanye na ntinye weebụ nke onye na-ahụ ihe ntanetị, mee ihe ndị a:
Gbasaa udi otu "Ntọala" ma họrọ ngalaba n'ime ya "Ọhụụ WAN".
Na menu popup "Ụdị njikọ WAN" chọta onye kwesiri ya ma kpo ya iji gosiputa uzo ozo.
Tinye aha njirimara, paswọọdụ, DNS, adreesị MAC na data ndị ọzọ, dabere na akwụkwọ ndị na-enye gị. Na njedebe echefula ka ị pịa "Zọpụta mgbanwe".
Ụfọdụ ụdị nkwado 3G na 4G. A na-agbanwe ha na windo dị iche, a na-eme mgbanwe na ya site na ịpị "Channel ọwa 3G / 4G".
N'ebe a, ị nwere ike ịmepe ọwa, họrọ onye na-eweta yana iwu maka ịmeghachite na ịlele adreesị IP.
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ịkọwa oge na ụbọchị ka ngwanrọ ahụ wee nakọtara ọnụ ọgụgụ ma gosipụta ya na ihuenyo. Gaa na ngalaba "Ụbọchị na Oge" ma tinye nọmba kwesịrị ekwesị n'ebe ahụ, wee pịa "Zọpụta mgbanwe".
Ugbu a, njikọ ejikọtara ya kwesịrị ịrụ ọrụ na ị ga-enwe ike ịnweta Ịntanetị. Otú ọ dị, ọnọdụ ikuku na-adịghị arụ ọrụ. Ọ dịkwa mkpa nhazi nhazi:
Meghee "Ntọala Ntọala" site "Wi-Fi netwọk".
Debe ihe kwesịrị ekwesị. A na-enwekarị ihe bara uru nke 2.4 GHz bụ ezigbo. Pịnye aha dị mma maka isi gị ka ịchọta ya na nchọta. Ị nwere ike ịkwụsị ọnụọgụ data ma ọ bụ hapụ njirimara ndabara. Ozugbo agwụchara, tinye mgbanwe ndị ahụ site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Ụfọdụ ụdị na-akwado arụ ọrụ ọrụ nke ọtụtụ isi ohere n'otu oge. Iji lee ha pịa "Oghere Ebe Nweta Access".
Ị ga-ahụ ndepụta nke VAP niile na ị nwere ike ịnye onye ọ bụla n'ime ha.
Lezienụ anya na nchekwa Wi-Fi. Gaa na ngalaba "Isetịpụ Nchebe". Na windo nke mepee, họrọ isi okwu gị, ụdị nke izo ya ezo. E kwuola na nhọrọ kachasị mma n'oge ahụ bụ "WPA2".
Ụdị nke ezoro ezo ọ bụla nwere nke ya. Ọ na-abụkarị iji dozie paswọọdụ siri ike na-enweghị agbanwe ihe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na onye nrụnye na-akwado VAP, ọ pụtara na ngwa WDS dị na interface weebụ. Ọ na-ejikọta njikọ ọ bụla na ibe ya, nke a na-eme ka mpaghara Wi-Fi kpuchie ya. Gaa ntuziaka ndị mmepe nyere iji hazie atụmatụ a ma dezie ihe ndị dị mkpa.
A na-eme nlekota njikọ nke netwọk ikuku site na ngalaba ahụ "Control Access". E nwere ọrụ abụọ ebe a - "Machibidoro ndepụta" ma ọ bụ "Kwe ka edepụtara". Debe iwu kwesịrị ekwesị ma gbakwunye adreesị MAC nke a ga-etinye n'ọrụ ya.
Edebere WPS maka njikọ ngwa ngwa na ebe ọhụụ na nchebe a pụrụ ịdabere na ya. Na taabụ kwekọrọ na ị nwere ike ime ka ọnọdụ a rụọ ọrụ, dezie ọnọdụ ya ma gbanwee koodu PIN gaa na nke kachasị mma.
Hụkwa: Gịnị bụ WPS na onye rawụta na ihe mere?
Ihe ikpeazụ n'ime ngalaba "Wi-Fi netwọk" Enwere mgbanwe nke oge ọrụ nke isi. Ọ dịghị achọrọ ọtụtụ ndị ọrụ, ma mgbe ụfọdụ ọ bara uru - maka ụbọchị ọ bụla n'izu ị nwere ike ịtọ oge mgbe netwọk ga-arụ ọrụ.
Nke a mezighara usoro nke nhazi nke Ịntanetị, ọ na-anọgide na-ekpebi ihe ndị ọzọ na ngwaọrụ ndị dị na interface weebụ.
Ụfọdụ ndị ọrụ chọrọ nchebe nke netwọk nke aka ha, igbochi adreesị IP ma ọ bụ njikọ mpụga. N'okwu a, ọtụtụ iwu ga-abịa napụta, mgbe ịmechara ọrụ nke a ga-echebe gị dịka o kwere mee:
Nke mbụ anyị na-enyocha ngwá ọrụ ahụ. "Nzacha site na adreesị IP". Ntugharị a na submenu sitere na ngalaba "Nweta". N'ebe a ị nwere ike ịtọ ndepụta nke adreesị ndị na-agaghị ezite nchịkọta site na rawụta gị. Gbanyụọ ọrụ ahụ ma jupụta na mpaghara kwesịrị ekwesị.
Odika otu akwukwo ahu na-aru oru n'onu mmiri. Naanị ebe a ka a ga-enyefe ya na ihe omume na ọdụ ụgbọ mmiri abanyela n'ọchịchị ahụ.
A na-egbochi ntinye aka na redio site na adreesị MAC. Mbụ ị chọrọ ịma ya, wee gbanwee nzacha ma mejupụta ụdị ahụ. Tupu ị pụọ, echefula ịchekwa mgbanwe.
Ị nwere ike igbochi ịnweta saịtị dị iche iche na menu. "Ntugharị URL". Tinye na ndepụta niile njikọ ịchọrọ igbochi.
Ntọala di elu
Njikọ weebụ nwere windo maka ịrụ ọrụ ahụ. Dynamic DNS (DDNS). Ọ na-enye gị ohere kee ngalaba aha na adreesị IP, nke bara uru mgbe ị na-emekọrịta ihe na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ ihe nkesa FTP. Mbụ ị ga-akpọtụrụ onye na-eweta ọrụ iji nweta ọrụ a, wee jupụta n'ahịrị na menu a dịka data nyere site n'aka onye na-eweta Ịntanetị.
"QoS" ka edepụtara bandwidth n'etiti ngwa. Ịkwesịrị ịgbalite ọrụ ahụ ma hazie iwu, nke na-egosi adreesị IP nke usoro ihe omume ma ọ bụ onye ahịa, ụdị na bandwit maka ibudata na nbudata.
Lezienụ anya n'ụdị ọrụ. Na Nna-ukwu, a na-ahọrọ ya na mmalite. Gaa nkọwa nke ọnọdụ ọ bụla maka NAT na akwa ọrụ, wee jiri akara akara akara ya.
Nhazi zuru oke
Na nhazi usoro a, ọ na-anọgide na-emepụta ihe omume dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ma ị nwere ike ịga n'ihu na-arụ ọrụ na router:
Gaa na otu "Ọrụ" ma họrọ ebe ahụ "Nịm Paswọdu". Gbanwee aha njirimara gị na igodo nchekwa iji kpuchie interface weebụ gị. Ọ bụrụ na ị na-echezọ data na mberede, ịnwere ike ịtọ ntọala ahụ ma ha ga-abụ ndabara. Gụkwuo banyere nke a n'isiokwu anyị ọzọ na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Paswọdu ntọala na rawụta
Na ngalaba "Save / Load Settings" Ị nwere ike ịnyefe nhazi ahụ na faịlụ na-enwe ike ịmaliteghachi. Mee ndabere ka ọ bụrụ ihe nrụpụtara, anaghị eji aka gị dozie ya niile.
Bugharịa na Rụgharịa ma malitegharịa ihe ntanetị ahụ, mgbe ahụ mgbanwe niile ga-arụ ọrụ, njikọ ahụ jikọtara ya ga-arụ ọrụ ma a ga-arụ ọrụ ọhụụ.
Usoro maka ịhazi Ntọala ndị na-eme njem site na Ịntanetị bụ ọrụ dị mfe. A chọrọ onye ọrụ ahụ ịmata ụkpụrụ ndị ọ ga-egosi n'ahịrị ma jiri nlezianya nyochaa ozi zuru ezu. Mgbe ahụ, a ghaghị imezi ọrụ ziri ezi nke Intanet.